Ihotele iAngel ePalestine ibamba iindwendwe ezingama-40 ezizimeleyo ezibandakanya amaMelika ali-14
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ihotele iAngel ePalestine ibamba iindwendwe ezingama-40 ezizimeleyo ezibandakanya amaMelika ali-14
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • IPalestine Breaking News • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ubuncinci abantu abangama-40 babekelwa bodwa ngokuchasene nentando yabo kwihotele yasePalestine kufutshane neBhetelehem, eWest Bank, ngenxa yokuqhambuka kwe-coronavirus Babandakanya abemi baseMelika abali-14, kunye neendwendwe nabasebenzi abangama-25 basePalestine.
Ihotele iAngel, ubukhulu becala iChristian Beit Jala, kwintshona yesixeko apho kwathiwa uYesu wazalelwa khona, kulapho kwafunyanwa khona abantu abasixhenxe ukuba banentsholongwane, nto leyo eyabenza baba ngamatyala okuqala aziwayo kwiPalestine Authority. ngoLwesine kusasa.
"Mna nabasebenzi bam singaphakathi ehotele," utshilo uMaryana al-Arja, umphathi, uxelele iMedia Line.
"Abantu baseMelika bayishiyile ihotele ngale ntsasa, kodwa amaPolisa oKhenketho asePalestine abuya nabo kuba khange bakwazi ukufumana enye indawo" kwindawo yaseBhetelehem, utshilo. "Abantu abasixhenxe abosulelekileyo okanye ekurhaneleka ukuba bosulelekile bangaphakathi ehotele."
Uthi zonke iindwendwe zehotele zikumagumbi abucala kwaye amagosa ezempilo e-PA akhoyo ukwenza amalungiselelo okubahambisa ukuba baye kunyango.
"Iindwendwe zaseMelika ziyayazi le meko kwaye zinxibelelana nozakuzo welizwe labo," u-Arja uqhubeke. “Abasemagunyeni kwa-Israeli bacele ukuba amaMelika abekelwe bucala iintsuku ezili-14 phambi kokuba amkelwe kwa-Israyeli. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho iisampulu zithathiweyo kubantu baseMelika. Simemelela amagosa ezempilo ukuba asazise ngesicwangciso sawo. ”
ICandelo lezoKhuselo lakwa-Israeli layalela ukuba kuphele ukuwela ukusuka kuloo ndawo de kufike esinye isaziso.
Okwangoku kukho iimeko ezili-17 ezaziwayo ze-coronavirus kwa-Israyeli, apho kunyanzelwe amanyathelo anzima kumzamo wokunqanda ukusasazeka.
Abemi bamanye amazwe abafika bevela kumazwe ahlaselwe kanobom eAsia naseYurophu bayalelwa ukungena kwa-Israyeli, ngelixa abakwa-Israyeli ababuyayo kwezo ntlanga bethunyelwa kwangoko. Ukuza kuthi ga ngoku, kuqikelelwa ukuba phantse abantu abali-100,000 XNUMX kwaSirayeli bazimele bodwa.
Omnye umthombo ehotele eBeit Jala uxelele iMedia Line ngomnxeba ukuba "kukho imeko yokothuka, ukuphazamiseka kunye noloyiko" ngenxa yokunqongophala kolwazi.
“Akukho mntu ovela [kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo we-PA ebesinxibelelana nathi; sifumana ulwazi kumajelo osasazo [nangona] ulwazi kumajelo onxibelelwano aluthembekanga kwaye abantu banexhala, ”utshilo umthombo.
Omnye umntu apho uxelele iMedia Line ukuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye, kuye kwafuneka alumkise abantu abangena ehotele ukuba bangangeni. Wongeze ngelithi icandelo lamapolisa e-PA ebekwe ngaphesheya kwesitalato alwenzi nzame zokunqanda abantu ukuba bangene kweli ziko.
"Indawo ayivalwanga ngokufanelekileyo," omnye umthombo ehotele uxelele iMedia Line.
"Ngaphambili, umntu othile wangena wadibana nomhlobo wakhe ngaphakathi ehotele ovalelwe yedwa. Ukwazile ukungena ehotele engakhange amiswe?" Umthombo uqhubeke. Akukho zixhobo zonyango ezifana neemaski zobuso ezizisiweyo kuthi. Akukho kutya kuzisiweyo kuthi. Kukho abantu abangama-40 apha. Saxelelwa ukuba sahlukanise abantu abasixhenxe abarhanelwa ukuba bane-coronavirus kumagumbi bebodwa. Ukuba omnye wethu uyaphuma ehotele, siza kungcolisa isixeko siphela. ”
I-Media Line ikwazile ukufikelela kuMohammad Awawdeh, isithethi se-PA Ministry, othe ubuphathiswa "busebenza ngokukhawuleza nangokukhawuleza ukuvavanya wonke umntu kwaye banike iimpendulo ezicacileyo." Esinye isithethi somphathiswa, uGqirha Dhareef Ashour, ukhuphe ingxelo ngoLwesine ngokuhlwa ebigxeka kabukhali abantu abaxoxa ngalo mba kumaqonga onxibelelwano.
"Ngoku sinamajelo eendaba ezentlalo azizigidi ezine zeentatheli zasePalestine, elowo ene-ajenda yakhe kunye nokugxekwa malunga nendlela yokulawula le ngxaki," utshilo u-Ashour.
I-PA iqalile ukusasaza isibulali-zintsholongwane kuyo yonke iBethlehem Manger Square kwaye kuthiwa iye yayivala iBandla lokuzalwa kukaYesu de kwaphinda kwaziswa.
I-PA ikhethe ikhampasi yeYunivesithi i-Istiqlal eJeriko njengendawo yokuvalelwa, into egcule abahlali bendawo, uninzi lwayo luthi luqhushululu ezitratweni, luvala amasango aphambili esixekweni kumantla oLwandle oluFileyo.
Abaququzeleli, abaqondwa yiMedia Line ukuba basuka kwiqela eliphambili leFatah likaMongameli we-PA uMahmoud Abbas, bafuna ukuba abantu baqinisekiswe ukuba banesifo secoronavirus apho bahlala khona.
Omnye wabaqhankqalazi uxelele iMedia Line: “Luxanduva loMphathiswa Wezempilo ukukhusela indawo nganye kwimeko nganye kuba ukubathuthwa kwabo kuyingozi kwimpilo yabanye abahlali.”
UAbbas ubhengeze imeko yongxamiseko yenyanga yonke kuyo yonke imimandla yasePalestine ngenxa yecoronavirus.
Umthombo eRamallah uxelele iMedia Line ukuba ubunkokheli basePalestine babenomsindo ngurhuluneli waseBhetelehem ngendlela awayeyiphethe ngayo le meko.
"Umongameli [Abbas] ucinga ukukhulula irhuluneli emsebenzini wakhe, utshilo umthombo.
by Mohammad al-Kassim / Umgca weendaba